Bogga ugu weyn Imisa Caymis Nololeed ayaan u Baahanahay? | Tilmaan Buuxo
Xitaa haddii aad tahay waalid guriga jooga, weli waxaad qiimo u leedahay qoyskaaga dhaqaale ahaan. Haddii aad u malaynayso in aad masuul ka tahay laba carruur ah oo yaryar. Haddii aad dhimato, xaaskaagu waa inay sii wadato shaqada, taas oo macnaheedu yahay carruurtu waxay u baahan doonaan xannaano ama xannaano. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn caymis nololeed oo weyn, laakiin waxaad iibsan kartaa mid daboolaya baahiyaha dhaqaale ee qoyskaaga.
Caymiska noloshu waa heshiis sharci ah oo u dhexeeya adiga iyo shirkad caymis. Beddelka lacagahaaga ceymiska ah, shirkadda caymisku waxay siin doontaa ka-faa'iideystayaasha lacag aad u badan oo loo yaqaan dheefta dhimashada dhimashadaada ka dib.
Lacagta loo soo diro ka-faa'iideystayaashaada waxaa loo isticmaali karaa ujeedo kasta oo ay doortaan.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo helo caymiska nolosha; Intee in le'eg ayaa caymiska nolosha aad u baahan tahay iyo nooca ugu wanaagsan ee caymiska nolosha ee aad gasho.
Inaad haysato caymis nololeed sida shabagga badbaadada waxay dammaanad qaadi kartaa in qoyskaagu uu joogi karo gurigooda oo uu bixin karo waxyaabaha aad qorshaysay.
Noocyada caymiska nolosha
#1 Caymiska Nolosha ee muddada
#2 Caymiska Nolosha Joogtada ah
Yaa U Baahan Caymiska Nolosha?
Maxaa daboola Caymiska Noloshu?
Maxay dadku u iibsadaan caymiska nolosha?
Waa imisa Qiimaha Caymiska Nolosha?
Intee in le'eg ayaa Caymiska Nolosha aan u baahanahay?
Sida Loo Helo Caymiska Nolosha
Forbes Caymiska nolosha waxa uu ku qeexayaa heshiis adiga iyo shirkad caymis ah oo shirkadda caymisku ku heshiisay in ay bixiso lacag aad u badan oo loo yaqaan dheefta dhimashada ka-faa'iidaystayaashaada dhimashadaada ka dib. Waxa kale oo lagu sifayn karaa heshiis ka dhexeeya caymis hayaha iyo caymis, halkaas oo caymisku ogolaado inuu bixiyo lacag gaar ah marka uu dhinto qofka caymisku galay. Waxaa jira kiisas gaar ah sida jirro dhiman ama jirro halis ah oo sidoo kale kicin kara lacag-bixinta.
Lacagta la siiyo ka-faa'iideystayaasha waxaa loo isticmaali karaa wax kasta. Inaad haysato caymis nololeed waxay hubisaa in qoyskaagu aanu dhaqaale ahaan ku xayirmin inay ka xumaadaan warka dhimashadaada.
Waxaa jira laba nooc oo caymis nololeed oo waaweyn: caymiska muddada iyo caymiska nolosha joogtada ah.
Caymiska nolosha muddadu waxa uu bixiyaa caymis wakhti go'an iyo lacag-bixinaha premium-ku waxa ay ahaanayaan isla qaddarka inta ay siyaasadda socoto. Caymiska noocaan ah ayaa ah kan ugu caansan waxaana laga iibiyaa 71% iibsadayaasha, sida ku cad Warbixinta Barometer Caymiska. Caymiska nolosha ee muddada waxa uu kuu ogolaanayaa inaad doorato dhererka siyaasadda ee u dhexeeya 10, 15, 20, 25, ama 30 sano.
Haddii caymisku ku dhinto muddada siyaasadda, ka-faa'iideystayaashu waxay xarayn karaan cabasho oo waxay heli karaan lacagta dheefta dhimashada cashuur la'aan.
Marka muddada siyaasaddu dhammaato, waxa laga yaabaa inaad awoodo inaad ku cusboonaysiiso caymiska muddo hal sano ah oo dheeraad ah, kaas oo loo yaqaan dib-u-cusboonaynta la hubo. Si kastaba ha ahaatee, heerka cusboonaysiinta ayaa kordhin doona sannad kasta.
ARAG SIDOO KALE: Waa Maxay Caymiska Shaqo La'aanta Iyo Sida Loo Gudbiyo NJ
Caymiska nolosha ee joogtada ahi waxa uu bixiyaa caymiska nolosha oo dhan. Waxay soconaysaa inta aad nooshahay waxayna badanaa dhistaa qiimo lacageed. Qaybta qiimaha lacagta caddaanka ah waxay ku salaysan tahay dib-u-dhigista canshuurta ee nolosha siyaasadda.
Noocan caymis nololeed waxa uu kuu ogolaanayaa inaad wax ka amaahato qiimaha lacagta caddaanka ah ee siyaasadda ama aad ka baxdo. Mar kasta oo aad go'aansato inaad ka baxdo, waxaad heli kartaa qiimaha lacagta caddaanka ah oo laga jaray kharash kasta oo is-dhiibid ah.
Marar badan, qiimaha kaashka ayaa laga yaabaa inuu si tartiib ah u kordho sanado badan, markaa ha ku xisaabtamin inaad hesho qiimo lacageed badan isla markaaba.
Caymiska noloshu waxa uu door muhiim ah ka ciyaari karaa istiraatijiyad maaliyadeed oo dhamaystiran. Caymiska nolosha ayaa kuu ogolaanaya inaad magacowdo mid ama ka-faa'iideysteyaal heli doona gunnada dhimashada haddii aad dhimato. Iyada oo ku xidhan baahiyahaaga, cadadka faa'iidada dhimashadu waxay u dhaxayn kartaa $10,000 ilaa in ka badan $1 milyan.
Si aad fikrado ugu hesho sababta aad ugu baahan tahay caymis nololeed halkan waxaa ah qodobo go'aamin kara oo ku qancin kara:
Haddii lammaanahaagu uu ku nool yahay dakhligaaga: Haddii aad carruur leedahay iyo haddii kaleba, xaaskaada waxa laga yaabaa in dakhli la'aan looga tago haddii ay ku tiirsanaadaan dakhligaaga oo keliya. Haddii aad ku gudbi lahayd, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso kharashaadkooda iyo inay bilaabi karaan shaqada iyo in kale.
Haddii aad leedahay carruur yaryar: Marka loo eego USDA, celceliska kharashka korinta ilmaha laga bilaabo dhalashada ilaa da'da 17 waa $233,610. Haddii aad leedahay carruur u baahan doona cunto, hoy, dhar, iyo waxbarasho markaad dhimato ka dib, waa inaad ka fikirtaa iibsashada caymiska nolosha.
Haddii aad wax ku darsato amaahda qoyskaaga ama kharashyada kulliyadda: Haddii adiga iyo xaaskaaga/saygaaga aad leedihiin dayn ama aad bixinaysaan kharashyo badan sida kulliyadda carruurtaada, helitaanka caymis nololeed waxa ay dadka aad jeceshihiin siisaa fududayn dhaqaale marka aad ugu dambayntii ka tagtaan adduunkan.
Haddii qoyskaaga ay ku adkaan doonto inay bixiyaan kharashka aaska: Dadka intooda badan, qiimaha dhexdhexaadka ah ee aaska Maraykanka waa $7,640. Haddii aad u malaynayso in qoyskaagu ay dhibaato kala kulmi karaan bixinta kharashyada aaska marka aad dhimato, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato siyaasad caymis nololeed si ay qofka aad jeceshahay uga werwero sida loo maalgeliyo aaskaada marka ugu dambayntii timaado.
Haddii aad ka tagi lahayd daynta dhaxalkaaga: Haddii deyn lagu leeyahay oo aad hubto in deyntu ay sii jiri karto xitaa ka dib dhimistaada, qaadashada siyaasadda caymiska beenta waxay ka ilaalinaysaa xaaskaaga ama qof kasta oo aad la wadaagto akoon gaar ah inay dhaxlaan deymahaas oo ugu dambeyntii ay si qasab ah uga bixiyaan deynta.
Haddii aad leedahay shuraakado ganacsi oo dhici kara la'aantaa: Haddii joogitaankaaga meheraddaadu tahay iftiinka iyo rajada kaliya ee iftiimaya, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku biirto siyaasaddaada caymiska nolosha si aad u badbaadiso ganacsiga haddii ay dhacdo dhacdo murugo leh sida dhimashadaada.
Haddii aad leedahay qof weyn oo ku tiirsan baahiyaha gaarka ah kaas oo aad daryeesho dhaqaale ahaan: Waalidiinta qaarkood waxay siiyaan taageero dhaqaale ubadkooda baahiyaha gaarka ah inta ay nool yihiin. Haddi ay tani ku sharaxdo, siyaasadda caymiska nolosha ayaa hubin karta in ilmahaagu haysto wax kasta oo ay u baahan yihiin haddii ay dhacdo inaad dhimato.
Si kooban, haddii aad tahay nin qoys, buul madhan, milkiile ganacsi yar, hawlgab ama qof weyn oo aan waxba kaydin, waxaad u baahan tahay caymis nololeed.
LA XIDHIIDH BADAN: SIDA LOO CODSADO DEYN GANACSI OO YAR 10 TALLAABO OO FUDUD
Caymiska noloshu wuxuu daboolaa ka-faa'iideystayaasha siyaasadda ilaa xad maadaama ay bixiso faa'iidooyin maaliyadeed qaab lacag caddaan ah oo la siiyo ka-faa'iideystayaasha qofka dhintay. Noocan caymisku wuxuu daboolayaa:
Bedelka dakhliga inta lagu jiro sanadaha shaqada ee caymisku
Kharashyada ugu dambeeya sida aaska, sanduuqa iyo goobta xabaalta (ama kharashka gubista)
Amaahda amaahda, deynta baabuurta iyo deymaha kale
Kharashyada mustaqbalka sida waxbarashada kulliyadda iyo hawlaha carruurta
Kharashka daryeelka ilmaha ama kaalmada guriga
Biilasha tamarta, raashinka iyo kharashyada kale ee aasaasiga ah ee nolosha
Ilaa hadda, caymiska nolosha waxaa loola jeedaa in la siiyo ka-faa'iideystayaasha taageero dhaqaale haddii ay dhacdo in caymisku dhinto. Caadi ahaan, ka-faa'iideystayaasha waxay ku bixin karaan dakhliga meel kasta, si kastaba ha ahaatee, iyo mar kasta.
Caymiska noloshu waxa uu siinayaa taageero iyo raaxaysi heer sare ah ka faa'iidaystayaasha haddii ay dhacdo dhimashada caymisku. Sida laga soo xigtay Forbes, daboolida aaska iyo kharashyada kama dambaysta ah ayaa ah sababta ugu horreysa ee ay dadku u iibsadaan caymiska nolosha. Miisaanka ballaaran, dadka badidood waxay aadaan caymiska nolosha si ay u kabtaan Dakhliga hawlgabka, wareejinta hantida, beddelidda mushaharka/dakhliga lumay, iyo ilaalinta waajibaadka maaliyadeed ee ka-faa'iideystayaasha. Haysashada caymiska nolosha waxay siisaa kuwa aad jeceshahay badbaado dhaqaale.
Qiimaha caymiska noloshu aad buu u kala duwan yahay iyadoo lagu salaynayo tiro shuruudo ah. Nooca caymiska nolosha ee aad heleyso wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah tixgelinta ugu qaalisan. Tusaale ahaan, isla qaddarka caymiska, caymiska nolosha ee muddada aad ayuu uga qaalisan yahay siyaasadda caymiska nolosha joogtada ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah arrimaha ugu caansan ee saameeya heerarka caymiska nolosha:
Da ' Inta yar ee aad ka yar tahay marka aad iibsanayso siyaasad way ka yar tahay, waxaad bixin doontaa. Taasi waa sababta oo ah fursadda dhimashadu way yar tahay.
Galmada. Dumarku waxay leeyihiin rajada nolosha oo ku dhawaad ​​shan sano ka dheer ragga, sida ay sheegtay Xarunta Qaranka ee Tirakoobka Caafimaadka. Tani waxay ka dhigan tahay in ragga guud ahaan ay bixiyaan wax ka badan caymiska nolosha marka loo eego dumarka (marka laga reebo Montana halkaas oo caymisyadu ay tahay inay bixiyaan heerarka caymiska nolosha jinsiga-dhexdhexaadka ah).
Caafimaadka. Caafimaadkaaga ayaa saameyn weyn ku leh heerarka caymiska noloshaada. Caymiska ayaa qiimeyn doona xaaladahaagii hore iyo kuwa hadda jira si loo xisaabiyo rajadaada nolosha.
Nolosha. Taariikhdaada wadista (sida xukunka DUI), diiwaanka dambiyada, iyo shaqooyinka khatarta ah iyo hiwaayadaha (sida quusitaanka quusitaanka) dhamaantood waxay dhalin karaan heerar sare oo caymiska nolosha ah.
Waxyaabaha kale ee lagu daro kharashka caymiska nolosha waa taariikhda caafimaadka qoyska, shaqada, hiwaayadaha, xaaladda degenaanshaha, heerka tubaakada, qadarka caymiska.
LA XIDHIIDH BADAN: 10 Siyaabood Oo Jaban Oo Lacag Looga Helo Hawlgabka | 2021
Inta badan khubarada dhaqaalaha ayaa kugula talin doona inaad haysato toban jeer dakhligaaga caymiska nolosha. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto xad inta ay le'eg tahay caymiska nolosha ee aad u baahan tahay. Qodobbada sida wanaagsan u hagi kara go'aanka inta caymiska nolosha ee aad u baahan tahay waa: heerka dakhligaaga, tirada dadka kugu tiirsan, iyo baahida gaarka ah ee ku tiirsanaantaada hadda iyo mustaqbalka.
Way fiicantahay in la go'aamiyo inta caymiska aad u baahan doonto si aad u bixiso ka faa'iidaystayaashaada kiiska dhimashadaada. Tan waxa ku jiri kara kharashyada aaska, kharashyada la xidhiidha kabidda dakhliga qoyskaaga, kharashka waxbarashada carruurtaada, iyo deymaha. Marka aad go'aansato inta aad rabto inaad uga tagto qoyskaaga, waxaad ka raadin kartaa inta ugu fiican.
Haddii aad hesho $50,000 sannadkii, waa in aad ku dadaasho iibsashada caymiska nolosha oo dhan $1 milyan.
Halka 10x ilaa 20x daqligaagu uu yahay bar bilow wanaagsan, taas oo ku xidhan qaab nololeedkaaga iyo baahiyahaaga, waxa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad hesho caymis badan. Shakhsiyaadka leh deyn badan, iyo sidoo kale kuwa carruur badan leh, ayaa laga yaabaa inay rabaan inay hiigsadaan faa'iido dhimasho oo weyn.
Shirkad kastaa waxay si kala duwan u qiimeysaa khatartaada; qaar baa ku lug badan kuwa kale. Si loo go'aamiyo haddii aad u qalanto siyaasadaha caymiska nolosha, shirkadaha badankood waxay kaa rabaan inaad marto tillaabooyin taxane ah.
Tallaabada 1: Buuxi codsi
Maxay shirkadaha caymiska nolosha ku weydiiyaan codsiga:
Taariikhda caafimaadka qoyska
Caadooyinka hab nololeedka
Waa lama huraan inaad si run ah uga jawaabto su'aalahan sababtoo ah shirkadu waxay xaq u leedahay inay tirtirto siyaasaddaada oo ay haysato wixii khidmadaha ah ee aad bixisay haddii ay ogaadaan inaad ku been abuurtay codsigaaga caymiska nolosha.
Talaabada 2: Mar baadhis jidheed (siyaasadaha qaarkood)
Qaar ka mid ah shirkadaha caymiska nolosha ayaa kaliya ku weydiiya su'aalo la xiriira caafimaadka codsigooda. Laakin kuwa kale ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inaad sameyso baaritaan caafimaad si loo qiimeeyo caafimaadkaaga guud. Maxaa lagu dari karaa baaritaanka caafimaadka:
Dib u eeg taariikhdaada caafimaad iyo taariikhda caafimaadka qoyska.
Dib u eeg caadooyinkaaga (sida sigaarka, cabbitaanka, jimicsiga, cuntada).
Hubi dhererkaaga, miisaankaaga, iyo cadaadiska dhiiggaaga.
Dhiig ka qaado.
Qaado muunadda kaadida.
Samee baaritaanno dheeraad ah (sida EKG, baaritaanka treadmill, raajada xabadka).
Talaabada 3: Bixi khidmadaha caymiska siyaasadda aad rabto
Si aad u hesho caymis nololeed, waa inaad doorataa dheef dhimasho oo la mid ah dakhligaaga lumaya. Waa inaad sidoo kale doorataa caymis nololeed oo aad awoodid, taas oo macnaheedu yahay in khidmaddu tahay wax aad awoodid inaad ku bixiso wakhtiga loogu talagalay muddada siyaasadda. Haddii aad isku daydo inaad hesho dheefta dhimashada oo aad u weyn marka loo eego heerka khatartaada, waxay u badan tahay in laguu diido siyaasadda caymiska nolosha. Haddii aad dooratid qiimo lacageed oo aadan awoodin oo aad joojiso bixinta khidmadaha siyaasadda, siyaasaddaada waa la tirtiri doonaa.
Caymiska noloshu wuxuu ku siin karaa xasilooni maskaxeed isagoo ilaalinaya kuwa kugu tiirsan haddi aad geeriyooto. Haddii aad leedahay carruur yar yar ama xaaska leh awood dakhligoodu xaddidan yahay, is-diiwaangelintu waxay noqon kartaa mid ka mid ah go'aamada maaliyadeed ee ugu fiican ee aad samayso. Weli, kuwa aan haysan kuwa ku tiirsan oo si fudud u raba inay dhistaan ​​hanti wakhti dheer ah, ka jaban, xulashooyin xaddidan waa in marka hore la tixgeliyaa.
Qaadashada wakhti aad ku baadho shirkadaha caymiska nolosha ugu fiican iyo fursadahaaga caymis ee kala duwan ayaa kaa caawin kara inaad hesho siyaasadda kugu habboon.
Investopedia.com - Intee in le'eg ayay tahay in aad qaadato caymiska nolosha?
forbes.com - Intee in le'eg ayaad u baahan tahay Caymiska Nolosha?
nerdwallet.com - Intee in le'eg ayaa Caymiska Nolosha aan u baahanahay?
us.cnn.com - Intee in le'eg ayaad u baahan tahay caymiska nolosha?
Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2021
Caafimaadku waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah baahida aadanaha ee ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho mar kasta. Tani…
Sida Lacagta Loogu Wareejiyo Kaarka Mushaharka Loogu Wareejiyo Koontada Bangiga: Tilmaan Buuxda 2022 -ka
Kaadhadhka mushaharka ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya isbeddelka cusub ee ganacsiyada yaryar, maadaama ay tahay hab fudud oo loogu talagalay shaqaalaha…